U-Eloka-Eboka wenza izifundo ezingaphezu kwezobudokotela emkhakheni we-Mechemical Engineering, u-Iwerere yena ungumcwaningi esifundweni se-Chemical Engineering.
Ukukleliswa-kuthatha iminyaka emihlanu - kuwuphawu lokuhlonishwa komsebenzi omuhle kakhulu owenziwa abacwaningi eNingizimu Afrika yonkana, lapho kuklonyeliswa laba ababonakala benekhono lokuba abacwaningi ngokubuka imisebenzi yabo, abakukhiqizayo, izingabunjalo lemiphumela yocwaningo kanye nomthelela walo emhlabeni jikelele, lokhu kwenzeka ekuqaleni komsebenzi wabo emva kweziqu zabo zobudokotela.
U-Eloka-Eboka ungumfundi oxhaswe i-NRF Scarce Skills Development aphinde abe ilungu le-African Academy of Sciences (i-AAS). Wenza ucwaningo oluhlanganise imikhakha ehlukahlukene, okwamanje ugxile kwi-Green Energy Technologies (isiphehlimandla, i-biofuels, i-bioenergy, kanye ne-bio-nanotechnology) eziphokophele ekwakheni izinsiza ezizoletha izixazululo ezizohlala isikhathi eside ezindaweni zaseNingizimu Afrika zekhethelo zamandla akheka kabusha, imfucuza, isimo sezulu ngokwenkathi kanye nesimonhlalo esingxube okukhulisa umnotho.
Imisebenzi yakhe ihlanganisa ukuhlola amandla emvelo nge-micro-algal technology ne-bio-nanomaterials, i-pioneering research ocwaningweni olusafufusa kwezobuchwepheshe be-bio-nanotechnology obuzosetshenziselwa amandla nezokushisa.
U-Eloka-Eboka, owafika e-UKZN ngonyaka wezi-2012 ezoqala izifundo zakhe zobudokotela, weza e-UKZN ngenxa yodumo lwayo lokuba iNyuvesi ehamba phambili kwezemifundaze kanye nokwenza kahle kakhulu kwezobunjiniyela. Uncome inqubomgomo yocwaningo kanye nokuphumelela kweNyuvezi ezintweni eziningi.
Uthe: ‘Ngiyambonga uNkulunkulu owenza konke kube impumelelo, ekuqaleni kwami ukusebenza bengikulangazelela ukubalwa phakathi kwabacwaningi abakleliswe yi-NRF. Kuzongikhuthaza ngisebenze kakhulu.’
U-Iwarere ungumcwaningi aphinde abe umphenyi omkhulu kumklamo wokucwaninga ngokuhlanza amanzi asesebenzile okuxhaswe i-Water Research Commission (i-WRC). Ugxile ekukhipheni okunobuthi okunzima ukukukhipha emanzini asesebenzile, usebenzisa izindlela ezejwayelekile zokuhlanza amanzi, ukuguqula imfucuza ibe amakhemikhali asetshenziswayo, anciphise ukuphuma kwesikhutha ngokuguqula isikhutha asenze ikhemikhali namafutha asebenzayo esebenzisa i-Plasma Technology. Lokhu kuveza okuzuzwe umphakathi kwaphinda kwaba nomthelela ukuthuthukiseni izizwe ezintathu ze-United Nations.
‘Injongo yami ukuthuthukisa izingabunjalo lezimpilo zabantu, ikakhulukazi e-Africa, ngokwenza ucwaningo,’ kusho u-Iwarere.
U-Iwarere, ufike e-UKZN ezoqala izifundo zakhe ze-Masters zingama-2009, wathanda i-UKZN ngenxa yesithombe sika Solwazi Deresh Ramjugernath, owayehlola izifundo zakhe zobudokotela neze-Postdoctoral fellowship. Waphothula iziqu zakhe ze-undergraduate neze-honours kwi-Industry Chemichal eNyuvesi yase-Ilorin nase-Nigeria.
Uthe uyambonga uNkulunkulu ngokuthi ibonakale imizebenzi yakhe, ikakhulu njengoba bebancane ososayensi eNingizimu Afrika abasebenzisa i-plasma technology ukuxazulula izinkinga zomnotho emphakathini.